Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Septhemba 26, 2020 00: 40 Awekho amazwana
Akuvamisile ukuthi kubhekiswe kwabomdabu base-Oceania noma ezwekazini I-Indian, isikhumba sayo esivame ukuba mnyama kakhulu kunaleso sabantu abathile base-Afrika kanye ne-fortiori yama-Afro-inzalo. Isizathu silula: kwabaseYurophu, "omnyama" ungumAfrika, okungukuthi isigqila (Isigqila esizayo, inzalo yesigqila, ongaba isigqila: akunandaba.) Umqondo womuntu omnyama - okuyisisekelo sobandlululo ngokuyisisekelo kuxhumene nobugqila.
Iqiniso lokuthi abantu abaningi base-Afrika kanye nabase-Afro-inzalo, ngenxa yokungazi, eminyakeni engaphezu kwamakhulu amabili ngemuva kokuqedwa kobugqila, basazibiza ngokuthi “abaMnyama”, ngaleyo ndlela bahlanganisa imiqondo eyakhiwe izigqila zaseYurophu zekhulu le-15 Ikhulu leminyaka, kusobala ukuthi yisigaba esiphezulu sokuhlukaniswa kwengqondo nobugqila. Singabona kulokhu ukuthi yiliphi inani lezombusazwe lomqondo we-negritude, ophethwe yizihlakaniphi ezibandakanya ubuhlanga nobukoloni baseFrance. (kwesokunxele-kuhlangene) ibilokhu inyusa kusukela ngawo-30, ngenkathi ithinta ukuyigxeka. Sizophinda futhi sifinyelele eziphethweni mayelana namaphephandaba aseFrance asebenzisa amagama amnyama "abamnyama" (omnyama) kepha ungalokothi ungene "kumJuda" ophathekayo (umJuda). Ngaleyo ndlela i-Le Monde noma i-Liberation.
Abekho "abamnyama", ngoba akekho umuntu ongakhetha umuntu ngebala lakhe ngaphandle kokucwasa. Kungcono ukukhuluma ngabantu abamnyama base-Afrika (Afrika) nenzalo yama-Afrika!
I-Oct20 08: 46